आफ्नो जीवनलाई कसरी अझ राम्रो बनाउने ! - सिधा दृष्टी
हामी आफ्ना अभावहरुलाई देखेर भविष्यको सामना गर्न डराउँछौँ । भविष्यमा के हुन्छ भन्ने डरसँग हामी बाँचिरहेका छौँ । भविष्य के हो त ? त्यो एउटा समय हो । त्यो खाली छ । भविष्य त खाली छ । तपाईं जे गर्नुहुन्छ नि त्यही अनुसार तपाईंको भविष्य तय हुन्छ । यदि तपाईं डराउनुभएको छ भने डराइरहनुहुनेछ । भविष्यमा पनि डराइरहनुहुनेछ । आज पनि डराउनुहुनेछ अनि यही डर कायम रहनेछ । भविष्य त एउटा रित्तो कागज हो । त्यसमा के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा
तपाईंमा निर्भर रहन्छ । तपाईंको भविष्य यही हो । तपाईंको संसारमा के भइरहेको छ ? तपाईंको संसारमा दुबिधा छ कि शान्ति छ ?
दश रुपैँयाँ कमाउनेलाई सय रुपैयाँको अपेक्षा हुन्छ । सय कमाउनेलाई हजार रुपैयाँको चाहना हुन्छ । हजार कमाउँछ भने उसलाई लाखको इच्छा हुन्छ । अनि, लाख कमाउनेलाई दस लाख चाहिन्छ । यदि तपाईंलाई यो कुरा सही होइन भन्ने लाग्छ भने तपाईं यो दुनियाँलाई हेर्नुहोस् । तपाईं यो संसारमा जे गर्न चाहनुहुन्छ नि त्यो गर्नुहोस् । तथापि, तपाईंभित्रको कुरा त तपाईंभित्रको कुरा हो । तपाईंभित्र त्यो आनन्द नभएसम्म, तपाईंमा त्यो शान्ति नभएसम्म बाहिर जस्तोसुकै वातावरण भए पनि तपाईं शान्त हुन सक्नुहुन्न ।
हामी आफ्नो जीवनलाई कसरी अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ ? वास्तवमा हामीले बाहिर देखिरहेको सौन्दर्यको सपना त पहिलादेखि नै हामीभित्र हुन्छ । मानिसले विनम्रता र मानवताको अभ्यास गरेर, आफ्नो हृदयमा स्थित शान्तिको अनुभूति गरेर जीवनलाई सफल तुल्याउन सक्छ । वास्तवमा हामी आफ्नो जीवनमा जुन कुराको बढी अभ्यास गर्छौँ त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छौँ । यदि हामीले रिसाउने अभ्यास गर्न थाल्यौँ भने हामी त्यसमै अभ्यस्त हुन्छौँ । त्यस्तै गरेर मानवताको अभ्यास गरेर त्यसमा पोख्त हुन सक्छौँ । यसरी नै यदि मानवताको अभ्यास गर्ने हो भने हामी त्यसमै दक्ष बन्छौँ । सत्यको अभ्यास गरेमा सत्यमा नै अभ्यस्त हुन्छौँ । आफूभित्रको प्रेमलाई प्राप्त गर्ने अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईं त्यसमा नै अब्बल हुनुहुन्छ । यसबारेमा तपाईं विचार गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा उज्यालो चाहनुहुन्छ भने तपाईंले अँध्यारोलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । केवल त्यो उज्यालोलाई आउन दिनु आवश्यक छ । जसै त्यो उज्यालो आउँछ त्यसपश्चात् अँध्यारो आफैँ हट्नेछ ।
निराश नहुनुहोस् । खराब समय पनि आउँछ अनि राम्रो समय पनि आउँछ नै । खराब समय आएका बेलामा एउटा ध्यानदिनुपर्ने कुरा के हो भने एकदिन यो समय बित्नेछ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा त के हो भने हामीले शान्तिका बारेमा विचार गर्दा यो त कतै अन्तबाट आउँछ अनि हामीले यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर सोच्छौँ । शान्ति त पहिलादेखि नै तपाईंभित्रै छ । तपाईंले अन्त कतै खोज्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । तपाईंले आफूले आफूलाई चिन्नुपर्ने आवश्यकता छ– तपाईं को हुुनुहुन्छ ?
सुकरातले भनेका थिए– “आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्” । वर्तमान सन्दर्भमा यस कुराको तात्पर्य के हो ?
अहिलेको मान्छेले हरेक कुराका बारेमा थाहा पाउने कोसिस गरिरहन्छ तर आफूले आफूलाई चिन्ने प्रयास गरिरहेको छैन । उसको सर्कल (वृत्त) मा निकै धेरै साथीहरु हुन्छन् । ट्विटरतिर, फेसबुकतिर, ह्वाट्स्एपतिर तर उसभित्र कुनै यस्तो चीज छ जसमा ऊ स्वयम् सम्मिलित होओस् ! वास्तवमा यदि मानिसले आफूले आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्ने हो भने उसले शान्ति आफैँमा प्राप्त गर्न सक्छ । तपाईं जुन चीजलाई खोजिरहनुभएको छ त्यो तपाईंभित्रै छ । यो एकदमै ठूलो खुशीको खबर हो । आफूले आफूलाई चिन्नु हाम्रा लागि अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । शान्तिका निम्ति यो सबैभन्दा पहिलो खुट्किलो हो ।
कुनै बेला कोही कुनै परिस्थितिका कारणले विवश भएको छ भने विवश भएका ती सम्पूर्ण मानिसलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, ‘सारा संसारमा अँध्यारै–अँध्यारो भएका बेलामा पनि तपाईंको हृदयमा एउटा दियो हुन्छ । त्यो बलिरहेको हुन्छ ।’ यदि त्यो दियोलाई तपाईंले बाहिर ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईंको अँध्यारो संसार प्रकाशमय हुनेछ ।
यो संसारमा मानिसको जन्म हुन्छ अनि एकदिन उसले यो संसारबाट बिदा लिनैपर्ने हुन्छ । यो कुनै तर्क या विचार–विमर्श गर्नुपर्ने कुरै होइन । वास्तवमा तपाईंको जीवनयात्रा तपाईंले लिनुभएको पहिलो श्वासबाट प्रारम्भ भएको थियो । तबदेखि नै यो श्वासको आउने–जाने क्रम रोकिएको छैन । यो निरन्तर चलिरहेको छ । यो जीवनभर तपाईंका साथमा रहन्छ । तपाईंको अन्तिम समयसम्म रहन्छ । तपाईंलाई थाहा छ– यो श्वास तपाईंमा आउँछ । यसमा ध्यान दिनुहोस् । तपाईंले आफूभित्र आइरहेको यो श्वासलाई ध्यान दिन थाल्नुभयो भने यसले आराम, चैन र सन्तुष्टि लिएर आउँछ । तपाईं जीवित हुनुभएकोमा कृतज्ञ रहनुहोस् ।
मानिसका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के हो ? जीवनमा कति कुराहरु भइरहन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने उसको श्वास निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ । यो श्वास चलेसम्म ऊ जीवित हुन्छ । यदि यो श्वास आउन–जान बन्द भयो भने त्यस मानिसका लागि सबै कुरा समाप्त हुन जान्छ । मूल कुरा यो श्वासका बारेमा हो । यो श्वास कति ठूलो आशीर्वाद हो । हामी यस कुरालाई बिर्सन्छौँ ! मानिसका लागि कति ठूलो कृपा भएको छ ! उसलाई यो जीवन प्राप्त भएको छ । यो शरीर प्राप्त भएको छ । हरक्षण उसमा यो श्वास स्वतः रूपमा चलेको छ । मानिसको श्वास चलिरहेको छ या छैन भन्ने कुरा नै उसको जीवनको पहिचान हो । यो श्वास सृष्टिकर्ताको कृपाले आफैँ आउँछ अनि आफैँ जान्छ । आफ्नो उपस्थितिका पछि उसले एउटा यस्तो समय दिएर जान्छ जसलाई कहिल्यै फर्काएर पाउन सकिँदैन । जब एउटा–एउटा श्वास लिनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय आउँछ नि हो त्यही अन्तिम समयमा यसको महŒव थाहा हुन्छ ।
जीवन भएकैले समस्याहरु पनि छन् । मानिस यी समस्याबाट भाग्न सक्दैन । वास्तवमा यी सबै समस्यालाई हामी आपैmँले बनाएका हुन्छौँ । समस्याको बोझ पनि धनी–गरिब सबैका लागि बराबर हुन्छ । एउटा फरक कुरा त के हो भने यी समस्याले हरेक व्यक्तिका अघि नयाँ रूप धारण गर्ने गर्छन् । फलतः सबैलाई दुःखी तुल्याइदिन्छ । तत्पश्चात् दुःखलाई सामना गर्दा–गर्दा मानिसमा निराशाले डेरा जमाउन थाल्छ ।
एउटा वास्तविकता के हो भने मानिसमा निराशा मात्रै होइन आशा पनि छ । आशा कस्तो भने जसरी सूर्योदय हुन्छ, अस्त हुन्छ अनि नयाँ बिहानी लिएर आउँछ । यसै गरी, मेरो हरेक दिन आशाले भरिपूर्ण हुनु आवश्यक छ । मैले हिजो जे–जस्तो गरेको भए पनि, मैले हिजो जे–जस्तो समस्यालाई झेलेको भए पनि ती सबै कुरा मेरा लागि आज बदलिन सक्छ । अतः म आफ्नो जीवन वास्तविक आशाका साथमा बिताउन सकूँ ।